Tsanangudzo:120W Polycrystalline Silicon Solar Cell Module,Customizable Polycrystalline Silicon Solar Panels,Polycrystalline Silicon Solar Panels
120W Polycrystalline Silicon Solar Cell Module,Customizable Polycrystalline Silicon Solar Panels,Polycrystalline Silicon Solar Panels
Home > Products > Solar Module &amp; Panel > Polycrystalline Solar Panels > 120W Customizable Polycrystalline Silicon Solar Cell Module
Iti customizable polysilicon solar panels ndiyo chizvarwa chitsva chemabhatiriyiti ane zvakakosha zvekushandurwa kwakanaka kwehutano uye hupenyu hurefu hwe monocrystalline silicon cells, pamwe chete nekugadzirisa maitiro emamorphous silicon masimbi mabheti emafuta uye zvishoma nezvishoma.
1. Girazi: Ultra-white textile tempered girasi, kureba 3.2 mm, mumhinduro yekuonekwa kwezuva rinoshandiswa kwezuva (320-1100 nm) kutumirwa kusvika 91%, kushandiswa kwemazuva ano, kushambadzira hakuregi. Izvo zvigadzirwa zvegorozi rinopisa zvinogona kumira zvakakonzerwa nehupamhi hwe25 mm ice hockey pa 23 m / s.
2. EVA: Ifilimu yeEVA yepamusoro yakakura ye 0.5mm inoshandiswa sechisiti chekuisa chisimbiso chemasero ezuva uye chibatanidza pakati peEVA film negirazi uye TPT. Inoshandiswa zvakanyanya uye kupesana nekukwegura. Izvo zvinoshandiswa zveEVA film ye solar cell packaging shure kwekuporesa ndeyotevera: kutumirwa kunopfuura 90%; kudarika kwepabonde kunopfuura 65-85%; kuongorora simba (N / cm), girazi / firimu inopfuura 30%; TPT / firimu inopfuura 15%; kutonhora kushorwa: kupisa kwepamusoro 85, kutsika kwakadzika - 40.
3TPT: Solar cell back, anti-aging, anti-corrosion, anti-ultraviolet mihizha, kupera kwemhepo nezvimwe zvinodiwa zvinokosha.
4. chimiro: the aluminium alloy frame ine simba rakasimba uye yakasimba kushandiswa kushamiswa kusasimba.
5. Chikamu chegorosi ine simba rekuzvichenesa uye inoderedza mikana yeguruva chizvarwa chinoshandisa simba rekugadzira simba.
Product Categories : Solar Module & Panel > Polycrystalline Solar Panels
100W Monocrystalline Silicon Solar Panels
Tsika Monocrystalline Silicon Solar Panels